I-OLED Pilot Line Ukunikela Ukufinyelela Okuguqukayo Nge-Laser Singulation
Insizakalo ye-'Lyteus 'kufaka phakathi ukusika kwe-roll-to-roll laser okuhlose ukuxhasa ukuthuthukiswa kwemikhiqizo yokukhanyisa emisha. I-Roll-up, roll-up I-consortium efaka phakathi i-UK's Center for Process Innovation (CPI) ihlinzeka ngezinsizakalo ngomugqa omusha wokushayela ongena kalula we-organic ye-LED ...
I-SLAC Iletha Ukulethwa Kwelensi Yokukhanya Enkulu Kakhulu Yomhlaba
I-Optics yekhamera yedijithali ye-Large Synoptic Survey Telescope ishiya i-LLNL ilungele ukuhlanganiswa. Umsebenzi omkhulu: ilensi enkulu kunazo zonke yekhamera enkulu yedijithali. Ilensi elinganisa amamitha ayi-1.57 ngaphesheya futhi kucatshangwa ukuthi iyilensi yokusebenza enkulu kakhulu eseke yakhiwa ifikile eSLAC National Ac ...
I-Fraunhofer HHI Ikhetha Uhlelo Lwe-Sputter Lwe-Veeco
Isikhungo sohlelo locwaningo lwe-telecoms se-optical se-ion beam sputtering system ukudala ukumbozwa kwe-laser facet namadivayisi we-micro-optical. I-HHI izosebenzisa ubuchwepheshe beVeeco be-IBS ukudala ukumbozwa kwe-laser facet. IVeeco Instruments imemezele ukuthi ithumele iSpector Ion Beam Sputtering (IBS) yayo ...